Real Madrid oo Bayaan ku Xaqiijisay In Cristiano Ronaldo Ku Biiray Juventus | KALSHAALE
Real Madrid oo Bayaan ku Xaqiijisay In Cristiano Ronaldo Ku Biiray Juventus
Muqdisho ( Kalshaale ) Kadib sagaal sanadood oo uu xirnaa Cristiano Ronaldo maaliyadda cadaanka ee Real Madrid ayaa soo dhamaaday wuxuuna si rasmi ah ugu biirayaa Juventus sida lagu cadeeyay bayaan kasoo baxay kooxda ka dhisan caasimadda Spain.
Cristiano Ronaldo oo shan jeer hantay Ballon d’Or sidoo kalana noqday xiddiga ugu goolaha badan taariikhda ayaaa la xaqiijiyay inuusan kusii sugnaan doonin kooxda fasal ciyaareedka dambe, waxaana la rajeynayaa inuu kooxda kaga baxo adduun dhan 105 Malyan oo Euro.
33-jirkaan heerka caalami ayaa dhaliyay 415 gool isagoo kooxda u saftay dhamaaan tartamada oo dhan 438 kulan, sidoo kalana mudada uu kooxda la joogo wuxuu hantay afar jeer koobka UEFA Champions League.
“Maanta, Real Madrid waxey dooneysaa iney sooa bandhigto sida ay ugu mahadineyso xiddiga caddeeyay inuu yahay kan ugu wanaasan Adduunka, sidoo kalana qeexay mid ka mid ah waqtiyada ugu fiican taariikhda kooxda iyo kubadda cagta dunida” ayaa lagu qoray bayaanka kasoo baxay Real Madrid.
“Marka laga soo tago koobka horyaalka, koobabkii uu ku guuleystay iyo guulahii uu garoonka dhexdiisa ku hantay mudadii sagaalka sano aheyd ayaa tusaale u ah Cristiano Ronaldo (Shaqada, masuuliyadda, xirfadda dabiiciga ah, huritaankii iyo hormarka uu sameeyay”.